पहाड बोकेर एक्लैएक्लै
प्रकासित मिति : २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार प्रकासित समय : ०६:५४
खगेन्द्र गिरि काेपिला
कोही पूर्वबाट फाल हाल्दै आइपुगेका छौं ।
कोही पश्चिमबाट दौडिदै आइपुगेका छौं ।।
२०७२ साल फाल्गुण १५ गतेको उज्यालो बिहान । हामी रिहारमा आइपुग्नेको सङ्ख्या एघार पुग्यो ।
बिहानको खाना त्यहीं खाइयो । चामल, दाल, तेल, मसाला, पानीका बोतल, बिस्कुट र चाउचाउ झोला—झोलामा खाँदेर भिरियो । हातमा लट्ठि समातिए । अनि रिहारखोलाको किनारैकिनार सोझै दक्षिण लागियो । राप्ती नदीको बगरमा एकछिन बालुवा र पानीसित रमाइलो गरे हाम्रो टोलीका युवा सदस्यहरुले । नीमबहादुरदाजुले ‘यतै रमाइलो गरेर समय सक्ने हो भने चुरेको लेकमा पुगेर के गर्ने हौ ठिटा हो? लौ हिडौं छिटो’ भनेर तताउनु भएपछि डुङ्गा चढेर राप्ती तरी पारी गयौं । हरियो गहुँबारीको बीचैबीच फराकिलो बाटो हिड्दै गङ्दी पुग्न आधा घण्टा लाग्यो । त्यहाँ भेटिए घनश्याम चौधरी । नीमबहादुर थापादाजुका परिचित र सहकर्मी रहेछन् । पहिल्यै खबर गरेर यतै खाना खान आउनु पर्ने भनेर निकै दुःखमनाउ गरे उनले । पानी चिया पिलाए । हाम्रा लागि दुईटा ट्रेक्टरको व्यवस्था पनि गरिदिए । उनकी श्रीमति सुत्केरी भएको कारणले घर छोड्न सकेनन् । ‘नत्र म पनि मिसिने थिएँ यही टोलीमा’ भन्दै आत्मियता पोखेर बिदाई गरे हामीलाई ।
टे«क्टर चढेर गङ्दीबाट बारह बजेतिर हामी दक्षिणतर्फ लाग्यौं । ‘ब्यानरमा पदयात्रा लेखिएको छ, फेसबुकमा टे«क्टर चढेको फोटो नहाल्नु होला है अंकल ! लाज हुन्छ’ महेन्द्र रोकाले जिस्क्याए नीमबहादुरदाजुलाई । चुरे पहाडबाट आएको गङ्दी खोलोको किनारैकिनारै बाटो गल्ड्याङगुल्डुङ गर्दै दक्षिणतर्फ लाग्यो । नाम खोला भए पनि खोलामा पानी बगेको देखिएन । खोलामा कतैकतै सुक्न लागेको कुलोमा पानी बगेको जस्तो देखिन्छ त कतै पानी जमेको जस्तो देखिन्छ । ‘वर्षातमा ठूलठूला भेल बग्छन् तर्न सकिन्न यो खोला’ ड्राइभरले वर्णन गरे खोलाको तर आफ्नो नामको इज्जत धान्न सकेको भने देखिएन यो खोलाले । चुरेका पाखामा काटिने काठहरु ओसार्नका लागि बनाइएको यो बाटो पनि कहाँ बाटोजस्तो छ र? टे«क्टरका ठूल्ठूला पाङ्ग्रा बाहेक अरु गुड्न सक्ने स्थिति छैन । कतै बालुवा, कतै ढुङ्गा त कतै धुलोले भरिएको छ बाटो । गङ्दी खोलाको बगरलाई कहिले पारि, कहिले वारि गरी पचासौं पटक तरियो होला त्यो दिन ।
बिस्तारै बाटो उकालोउकालो लाग्न थाल्यो । चुरेका पाखामा पातला रुखहरु उभिएका छन् । उमेर बढ्दै गरेको मानिसको तालु खुइलिएझैं पाखाहरु नाङ्गो हुने क्रममा छन् । कतैकतै फाट्टफुट्ट एक्लादुक्ला घर पनि देखिए । धुले बाटोमा कतै टे«क्टरका पुरै पाङ्ग्रा डुब्छन् त कतै ठूलाठूला ढुङ्गा अगाडि तेर्सिन्छन् । कतैकतै ठाडै उकालो बाटोमा टे«क्टर चढ्दै गर्दा डराएर ओर्लियौं पनि हामी । टे«क्टरले उडाएको धुलोले हाम्रो जिउ पुरै सेतै भैसकेको छ । डेड घण्टा जति कुदेपछि एउटा अग्लो पहाडको डिलनिर टे«क्टरले ओराली दियो । अब हामी पश्चिम तन्केको धुले बाटो छोडेर सिधै दक्षिणतर्फको पाखोमा ओर्लियौं । हिड्दै गरेको बाटो कतै ओरालैओरालो खोल्सातिर झर्छ त कतै अनकन्टार झाडीभित्र हराउँछ, कतै फेरि उकालो चढ्दै छ्याङ्ग उज्यालो डाँडामाथि आइपुग्छ । बाटोभरी खसेका पातहरुले बाटो पहिल्याउन पनि गाहारो हुन लाग्यो । मानिस र गाईबस्तु हिडेका डोब पछ्याउँदै हामी जताजता बाटो जान्छ उतैउतै हिडिरह्यौं । धेरै ठाउँमा बाटो हरायौं तर नीमबहादुर थापाका अनुभवी आँखाले जताजता जाउँ भन्छन् उतैउतै बाटो पहिल्याउँदै हिडेका कारण अन्ततः दुईघण्टाको हिंडाईपछि गडुलचुली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हाम्रो डफ्फा ।
गडुलचुलीबाट चारैपट्टि हेर्दा चुरेका थुम्काहरु होचाहोचा देखिदारहेछन् । जति उत्तरतिरका थुम्काहरु काटेर आइयो उति नै दक्षिणतिर पनि देखिए । ‘सायद यो चुरेको अग्लो चुली रहेछ’ धेरै नबोल्ने बीपी अस्तुले अनुमान लगाए । यहाँको अवस्थितिले हामी चुरे श्रृङ्खलाको बीच भागमा आइपुगेको जनाउ दियो । पूर्वपट्टि चट्टानैचट्टानले भरिएको निकै अनकण्टार भीर देख्यौं । त्यसैको माथिमाथि गरुड र चिलका बथान उडिरहेका देखिए । ‘सायद यिनै गरुडकै कारणले यसको नाम गडुलचुली रहेको होला’ श्रीधर भण्डारीले अर्को अनुमान गरे । यहाँ नास्ता खाएर फेरि हामी अघि बढ्यौं । अघि छुट्टिएको धुले सडक घुम्दै फेर्दै फेरि यतै भेटिन आइपुग्यो । मीनबहादुर रानाले गुल्मीको लवजमा लोकगीत गाए — छिनको छिनैमा, भेट भो माया, के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा । अघिको भन्दा केही सहज त भयो हिड्न तर घुम्दै फिर्दै त्यो बाटो फेरि पश्चिमतिरै लागेपछि हामी एउटा गोरेटो पहिल्याउँदै दक्षिणतिर लाग्यौं । उकालीओराली गर्दै बल्लबल्ल चुरेको दक्षिणी चुलीमा आइपुग्यौं । तल गहिराईमा साँगुरो फाँट र अलि पर जङ्गल देखियो । अलीअली घर पनि देखिए । नीमबहादुरदाजुले फेरि अनुमान लगाउनु भयो— ‘उ त्यही हो अडबरुआ नाका’ ।
चुरेको पाखो झर्दै अडबरुआ पुग्न हामीलाई एक घण्टाजति लाग्यो । उकालोभन्दा ओरालो झर्न झन् गाहारो हुन्छ भन्ने दृष्टान्तलाई पुष्टी ग¥यो यस ढुङ्गेलो ओरालोले । अडबरुआ खोलाको छेउमा पक्की धारो भेटियो । पानी पियौं मुख धोयौं एकछिन सुस्तायौं । केही महिला र बालबालिकाहरु धारा वरिपरि झुम्मिएका छन् । घाम डुब्ने बेला आफ्नो गाउँमा आइपुगेको हाम्रो डफ्फालाई कुतुहलतापूर्वक हेर्न थाले तिनीहरु । हामीलाई यही गाउँमा बिताउनु छ आजको रात । थाकेर लोथ परेको जिउलाई डो¥याउँदै हामी गाउँभित्र पस्यौं । गाउँको मुखैमा हामीलाई आँखा च्यातेर हेर्दै उभिइरहेका एकजना अधबैंसे भेटिए । सोधपुछ, परिचय गरियो । उनको नाम शंकर गिरि रहेछ । मैले मेरो नाम खगेन्द्र गिरि भनेर परिचय दिए पछि उनी छक्क परे । गिरिको जातीय साइनो जोडेर हाँस्दै उनले मलाई आफ्नै घरमा बस्न अनुरोध गरे । दुई टोली बनाएर अरुलाई गाउँतिर बस्ने व्यवस्था पनि मिलाई दिए उनैले । गिरि भनेपछि उनी मसित निकै झ्याम्मिए । घरमा आफ्नै नातेदार आएजस्तो गरेर निकै मानमनितो पनि गरे । दिन भरी उकालो ओरालो हिंडेकोले मेरो शरिर निकै थाकेको थियो, खुट्टा दुखिरहेका थिए । कुरा गर्ने जाँगर थिएन । पेटमा अलिकति तातो अन्न हालेर सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो तर शङ्कर गिरि मसित अनेक कुरा सोद्धै गफिन खोजिरहेका थिए ।
‘गिरि भएर पनि तँपाईहरुको घरमा न शिवधुनी देखियो न आँगनमा तुल्सीको मठ देखियो । तपाईहरु संन्यासी गिरि नै हो कि कुनै अर्कै गिरि हो शङ्करजी?’ भनेर सोध्दा घरका मान्छे एकअर्काको मुख हेर्न थाले ।
‘कमसेकम घरको चुल्हो छेऊमा एउटा त्रिशुलसम्म त गाडेर राख्नु पर्ने नि’ मैले फेरि प्रश्न तेस्र्याएँ ।
‘फाली हालेम्’ यसपटक उनकी श्रीमतिले मुख खोलिन् ।
‘अनि पूजाआजा कसरी गर्नु हुन्छ त?’ मैले फेरि जिज्ञासा राखें ।
‘हामी त मण्डली जान्छम्’ उनैले उत्तर दिइन् ।
‘के हो मण्डली भनेको?’ मैले जिज्ञासा पोखें ।
‘उ त्यै चर्चमा जान्छम्’ गाउँको छेउमा एउटा सेतो टिनले छाएको घर देखाए शङ्करले ।
उनीहरु त कृस्चियन भैसकेका गिरिहरु पो रहेछन् । मलाई गिरिहरुको गाउँको बीचैमा मन्दिर नभएर चर्च कसरी ठडिन पुगे छ? त्यसको कथा जान्न मन लाग्यो । दुई दर्जन जति घर भएको अडबरुआमा आठ घर त गिरिकै रहेछन् । रोल्पाबाट आएका गिरि, क्षत्री र मगरहरुले बसोबास गरेको अडबरुआ दाङ्को दक्षिणी सिमान्त बिन्दुमा चुरेको काखमा करिबकरिब अन्जानजस्तै भएर जीवन धानिरहेको गाउँ हो । यहाँ धेरै किसिमका असुविधा छन् तर सबैभन्दा बढी दुक्ख त पानीकै रहेछ । कृश्चियन धर्म प्रचारकहरुले सात किलोमिटर टाढा चुरेको लेकबाट पाइपद्वारा पानी ल्याएर गाउँमा पक्की धारो बनाइदिएपछि गाउँलेहरु उनीहरुप्रति अनुगृहित भएछन् । त्यही अनुग्रहको बोझले थिचिएर उनीहरुले जे भन्यो त्यही मान्न विवश हुँदै गए गाउँलेहरु । गाउँकी एउटी केटीले घोराही गएर बाइबल पढेर आएपछि त्यही चर्चको पाश्चर भएकी रहिछन् । अचेल उनकै खटनपटन चल्दो रहेछ गाउँमा । यो अनकण्टार ठाउँमा मठमन्दिर ब्राह्मण पुजारी केही नभएपछि मानिसलाई आफ्ना धार्मिक अनुष्ठान गर्न असजिलो हुँदै गयो । बिस्तारै मानिसहरु हिन्दु धर्मका कर्मकाण्ड, विधिविधानहरु बिर्सिदै गए । त्यही शूण्यताको स्थितिमा एकदिन आइतबार चर्चमा गएर प्रभुको भजन गाएर पाश्चरको प्रवचन सुने पुग्ने सजिलो कृस्चियन धर्मप्रति गाउँलेहरु आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो । ‘भुखे पेट भजन नाहीं’ (भोको पेटमा भजन हुन्न) भन्ने कबिरदासको दोहाको सम्झना आयो ।
शङ्करका बुवाको छ वर्ष अघि स्वर्गे हुँदा संन्यासी संस्कार अनुसार आँगनको छेउमा समाधि बनाएका रहेछन् । पहिलेपहिले हरेक साँझ उनी त्यही समाधिमा दियो जलाएर पूजा पनि गर्दा रहेछन् तर चर्च जान थालेदेखि त्यो पनि छुटे छ । त्यो साँझ हिन्दु धर्म नछोड्नु पर्ने भनेर उनीसित निकै गफ भयो मेरो । धर्म बदल्नु मान्छेको निजी अधिकारको कुरा होला तर यसरी आफ्नो धर्म बदल्दै अरुको धर्म अँगाल्दै गएपछि भावी पुस्ताहरु आफ्नो इतिहास, संस्कृति र परम्पराबाट नफर्किने गरी टाढा पुग्छन् भनेर मैले सम्झाएँ । हामी गिरिहरुका पुर्खा संन्यासी, सन्त, महन्तहरुले मुस्लिम र कृस्चियनहरुको अतिक्रमणबाट आजसम्म हिन्दु धर्मलाई कसरी जोगाएर ल्याए मैले त्यसका उदाहरण दिएँ । हाम्रा आदि जगतगुरु शंकराचार्य र गोर्खाली राजा पृथ्वी नारायण शाह हुन्थेनन् भने नेपाल पनि आज अफ्रिकाजस्तो इसाईमय वा बंगलादेशजस्तो मुस्लीममय भैसक्थ्यो होला भनेर अनेक उदाहरण दिएँ । मैले गिरिहरुको संस्कारको बारेमा जानेको सुनेको बुझेको भनें । उनीहरुले ध्यानपूर्वक सबै कुरा सुने ।
‘के गर्ने हजुर ! हामीले हाम्रो संस्कार बिर्सिदै गयौं । यसरी सम्झाउने मान्छे कोही भेटिएनन् । यति जानेको भए किन जाँदा हुम् मण्डली?’ शङ्करले लामो सास तानेर भने ।
भोलिपल्ट बिहान छुट्टिने बेलामा निकै भावुक देखिए शङ्कर । ‘आज यतै बसौं भोलि जानु होला’ भन्दै धेरै पटक अनुरोध गरि रहे उनी । हामीलाई चौबिस वटा नाका हिडेर बाँके पुग्नु छ । फिरन्ते—रमन्ते बनेर हिडेकाहरुलाई एउटै नाकामा दुई दिन बस्न संभव नभएको बताएपछि उनले बिदाई दिए ।
‘फेरिफेरि आइजानु होला’ उनकी श्रीमतिले पनि आत्मियता पोखिन् । गाउँको पुछारसम्म पु¥याउन आए शङ्कर गिरि । छुट्टिने बेलामा मेरो हात समातेर भने— ‘अब त म जान्न मण्डलीमा’ । मलाई उनको प्रतिबद्धताले खुसी बनायो ।
पोहोर हामीले चुरे साहित्यिक पदयात्रालाई मुसी नाकाबाट शुरु गरी कोइलाबासहुँदै खङ्ग्रा नाकामा आएर समापन गरेका थियौं । यो पाली खङ्ग्राबाट पैदल हिंडेर एक घण्टामा पुगिने अडबरुआ नाकाबाट पुनः शुरु गरेर हामी पश्चिम लाग्दै छौं । अघिल्लो वर्ष हाम्रो टोलीमा एघार जना थियौं यो पाली पनि एघारै जना भइयो तर दोहोरिनेमा परियो केवल पाँच जनामात्रै देउखुरीका नीमबहादुर थापा, गढवाका आशिष बुढा ‘कल्पवृक्ष’, लमहीका गुरुप्रसाद कुम्हाल र छविलाल कोपिला अनि नेपालगंजबाट ममात्रै । घोराहीका दीपक शर्मा ‘समीर’, नेपालगंजका श्रीधर भण्डारी, बीपी अस्तु, डम्मर थापा ‘आश्रीत’, महेन्द्र रोका र बुटबलका मीनबहादुर राना थपिएका छन् यो पाली हाम्रो डफ्फामा ।
अडबरुआबाट हिडेको तीन घण्टामा हामी बैरवानाका काटेर गौरियानाका आइपुग्यौं । बैरवाबाट हिड्दा हाम्रो पछिपछि दुईजनी महिलाहरु थपिएका थिए । हामीलाई खानाको मेसो मिलाउनु थियो । उनीहरुसित कुराकानीको शुरुआत गरे छविलाल कोपिलाले । गौरियाको प्राथमिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका रहेछन् । शङ्कर गिरिले गौरीयामा मेरा नातेदार पुरीहरुका घर छन् त्यहाँ गएर मेरो नाम लिनु भयो भने खानाको दुःख हुन्न भनेका थिए । त्यही कुरा सम्झाए पछि हामीहरुलाई चुर्णबहादुर पुरीको आँगनमा पु¥याइदिए उनीहरुले । बीस—बाइस ओटा घर भएको गौरियामा त्यै घर रहेछ अरुको भन्दा ठूलो । त्यो दिन उनको छिमेकीको घर छाउने कार्यक्रम रहेकोले सबै उतै व्यस्त थिए । कामको चटारो परेको बेला हाम्रो डफ्फालाई खाना पकाएर खुवाउने जाँगर उनीहरुले देखाएनन् ।
नीमबहादुर दाजुले —‘हामी अडबरुआबाट शङ्कर गिरिले पठाएर यहाँ आएका हौं, आउनु होस् न चिनापर्ची गरांै, कतै नातापाताको डोरी बाँधिएको पो छ कि?’ भन्नु भएपछि चुर्णबहादुर काम छोडेर हामीसित कुरा गर्न आए । नीमबहादुर दाजुले चुर्णबहादुर र मेरो बीचमा गिरि—पुरीको जातीय नाता जोडेर कुराको शुरुआत गर्नु भो । उनी सल्यानबाट त्यहाँ बसाई सरेर आएका रहेछन् । म बाजुराको गिरि हुँ । तैपनि दाङको त्यो अनकन्टार सीमान्त कुनामा ‘गिरि—पुरी’ को संन्यास परम्पराको साइनो लगाउँदा चुर्णबहादुर पुरी मसंगको परिचयले निकै खुसी देखिए ।
‘आउनु होस् न आफ्नै इस्टमित्र हुनुहँुदो रहेछ, एकछाक भात ख्वाउन पनि नसकौंला र’ भन्दै आफ्नो घरको पिंढीमा चारपाई ओछ्याए, हामीलाई बसाए । पानी पिलाए । उनकी श्रीमति हाँस्दै भान्सामा फ¥याकफुरुक गर्न लागिन् । चामल हामीले बोकेकै थियौं । साथिहरु पनि खाना पकाउने काममा सघाउन लागे ।
चुर्णबहादुर पुरीका छोरा, उनकी पत्नि जयपुरी गिरिकी छोरी । चुर्णबहादुरसित बिहे गरेपछि जयपुरी डबल पुरी भएकी रहिछन् । नाम जयपुरी थर पुरी । ‘बहिनीको नाम त संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिब बुत्रोस बुत्रोस घालीकै जस्तो मिलेको रहेछ जयपुरी पुरी’ मैले ठट्टा गर्न खोजें उनी मज्जाले हाँसिन् । ‘लौ दिदी छिटो पकाउनु प¥यो, यहाँ पेटमा मुसा दौडिन थालिसके’ श्रीधर भण्डारीले आफ्नो भोक पोखे । ‘छिटो पाक भनेर डेक्चीमा हात हाल्नु भएन, खुट्टा हाल्नु भएन, बरु मुसाको औषधि हालिदिनु प¥यो कि क्या हो भाइको पेटमा’ उनी पनि के कम । उनको जबाफले भोको पेट भए पनि सबै जनालाई मस्तसित हँसायो । चियामात्रै खाएर हिडेकोले हामी निकै भोकाएका थियौं तर खाना पाक्दा साढे एघार बजिहाल्यो । साथिहरुले थपिथपि भात खाए । खानाको पैसा दिन खोज्यौं तर उनीहरुले लिन मानेनन् । आफूले खाएका भाँडा आफै धुन खोज्दा पनि मानिनन् जयपुरी बहिनीले ।
खाना खाएर चुरेलाई दाहिने पार्दै फेरि पश्चिम तर्फको हिंडाई शुरु भयो । जङ्गलैजङ्गल, दशगजैदशगजा, कहिले उकालो, कहिले ओरालो निरन्तर हिडिरह्यौं ढुङ्गेलो बाटो । तातो घामले घरी गालामा, घरी निधारमा डाम्न छोडेको छैन । सालका रुखैरुखको बाक्लो जङ्गलको बीचैबीच बनेको दशगजालाई यहाँका गाउँलेहरुले बाटोमा रुपान्तरण गरिदिएका छन् । त्यसैमाथि हिडेर भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले गस्ती गर्न थालेपछि यो त अन्तराष्ट्रिय बाटो बनेको रहेछ । जताततै सालैसालका रुख, बाटोभरी सालकै पात खसेर सालमय भएको छ जङ्गल । सुकेका पातमाथि हिड्दा निस्किने आवाज पनि सङ्गीतमय बने झैं लाग्छ । सुनसान जङ्गलमा हामीले कुरा गर्दै हिडेको आवाज टाढा पुगेर बताससित ठोक्किदै फेरि फर्किएर यतै आउँछ । हाम्रै आवाज पनि अपरिचित बनेर तर्साएजस्तो गर्छ ।
छविलाल कोपिलालाई भेट्नै हम्मे । एकछिन भेटिन्छन् । ‘तपाइँहरुसित हिड्दा मेरो डोजै पुग्दैन’ भन्दै फेरि लमक्लमक लम्किदै अघिअघि हराउँछन् । बेलाबेला मिनबहादुर राना लोकगीत गाएर जङ्गलै थर्काउँछन् । डम्मर र आशिष चराजस्तै फिर्फिर गर्दै कहिले उफ्रेर रुखका हाँगा भाँच्छन् । कहिले बाटो वरपरका थुम्कामाथि चढ्छन् कहिले खोल्सामा हाम फाल्छन् । जङ्गलमा कुनै नयाँ चिज देख्यो कि टिपी हाल्नु पर्छ उनीहरुलाई । बनकुखुरा र फ्याउराहरु देख्यो कि लखेटिहाल्छन् । ‘अघिल्लो जुनीमा त यिनिहरु पक्का शिकारी नै थिए कि क्या हो?’ नीमबहादुरदाजु बेलाबेला उनीहरुको हौसलामा उत्साह थपिदिनु हुन्छ ।
बाटोमा गन्धैला नाका र छेकरिया नाका नामका साना गाउँ आए । गाउँ निकै सुनसान छन् । लाग्यो यी गाउँ मान्छेको बसोबास नभएका कुनै पुराना खण्डहर हुन् । डगमारा नाका पुग्न हामीलाई करिब तीन घण्टा लाग्यो । गन्धैला र डगमारा अलि अग्लो ठाउँमा रहेछन् । दुबै गाउँको तल गहिरो फाँटमा भारततिर सीमा सुरक्षाबलका ब्यारेक देखिए । डगमारा रसिलो रहेछ । गाउँ गहुँ र अरहरले हरियै देखियो । खेतैभरी गहुँका बाला लहलह झुलिरहेका छन् । बाटोको छेउछाउमा सालका स्याउलाले बेरेर बनाएका अस्थायी गोठहरु प्रशस्त देखिए । यहाँको दुध र खसीबोकाको खपत सीमा सुरक्षाबलका ब्यारेकमैं हुँदो रहेछ । गाउँका बाटा प्रायः सुनसान देखिन्छन् । डगमारामा सीमानै निर नेपालपट्टि ठूलो पानीको धारो देखियो । यति धेरै पानी बग्ने धारो सीमानाकाको यात्रामा कतै देखिएको थिएन । पानी पिएर एकछिन सुस्तायौं । धाराको छेउमा दुईजना महिलाहरु बसिरहेका थिए । परबाट आइरहेको हाम्रो डफ्फालाई उनीहरु आँखा नझिम्काएर क्वाक्र्वार्ति हेर्न लागे । उनीहरुको हामीप्रतिको उत्सुकतालाई हेर्दा लाग्यो, मानौ उनीहरु हाम्रै बाटो कुरेर बसेका हुन् । नजिक पुगेपछि नीमबहादुर दाजुले ‘के गर्न लागेको हो नानीहरु?’ भनेर गफिन खोज्नु भो ।
उनीहरुले के बुझे कुन्नि ‘इ देख्नु भएन? हामी त सुतेका छम्’ भनेर जिस्किदै उत्तर फर्काए ।
‘दिउँसै सुत्ने कस्तो चलन हो यो गाउँमा? त्यो पनि आँखा नचिम्लेर’ नीमबहादुर दाजुले पनि जिस्केकै शैलीमैं थप्नु भो । ती महिलाहरु पनि जे सोध्यो त्यस्को उल्टोपाल्टो जिस्किने पाराले जबाफ दिन थाले । ‘मजस्तो बुढो मान्छेसित पनि किन बाङ्गाटिङ्गा कुरा गरेका होलान्? यी नानीहरुले?’ उहाँ बाटोभरी जो भेटिए पनि केही न केही सोधेर डायरीमा टिप्दै हिड्नु हुन्थ्यो तर यहाँ निराशा हात लाग्यो । अन्ततः ‘नसकिने रैछ यी नानीहरुसित’ भन्दै बाटो लाग्नु भो ।
डगमाराबाट गम्भीरा नाका नामको सानो गाउँ काटेर एक घण्टामा स्युरेनी नाका पुग्यौं । स्युरेनी अलि फराकिलो फाँटमा फैलिएको गाउँ रहेछ । बाटोको छेउमा आँपका बोट लहरै उभिएका देखिए । चुरे पहाडको फेदमा थपक्क राखेका हरिया रुखहरुले शोभायमान छ यो गाउँ । बिहान अडबरुआदेखि दशगजाको किरिङ्मिरिङ बाटो भएर तय भएको थियो हाम्रो यात्रा । दशगजाको बाटो ठाउँठाउँमा अवरुद्ध भएपछि कहिले नेपालपट्टि लाग्यो कहिले भारतपट्टि लाग्यो । यसैगरी एकडेड घण्टा हिडेपछि नेपाली गाउँ देखिंदा पाइला गाउँतिरै मोड्यो । फेरि अर्को गाउँ जान दशगजामा झ¥यो । स्युरेनीसम्म दिनभरी चलिरह्यो यो क्रम निरन्तर । स्युरेनीबाट सुनपत्री जाँदा भने नेपालैनेपाल ट्र्ेक्टर हिड्ने घुले बाटोहुँदै हिड्न पाउँदा मन एकतमासले रमाएको छ । अघिल्तिर चुरेको एउटा होचो हाँगो उत्तर दक्षिण तन्केको देखियो । अहिल्यै दौडिदै गएर झ्याप्पै अँगालो हालौं जस्तो सलक्क परेको डाँडोको दृश्य निकै मनोरम छ । डाँडामाथि लहरै उभिएका रुखहरु पहरा दिइरहेका सैनिक जस्तै देखिए । त्यही पहाड बोकेर एक्लैएक्लै यी जङ्गल र यी पाखामा निस्फिक्री दौडिएको कल्पना गर्न थाल्यो मनले । हिड्दैहिड्दै त्यही पहाडको फेदमा रहेको सुनपत्री नाका पुग्यौं ।
गाउँका बाटाभरी हिलैहिलो, धुलैधुलो छ । हामी गाउँको चौबाटो निरको चौतारोमा बस्यौं । चौतारोनिर भीमबहादुर केसीको पसल रहेछ । पसलको आँगन र पिंढीमा केही मानिसहरु तास खेल्दै छन् । केही रक्सी पिउँदै छन् । हामी चिया पिउनपट्टि लाग्यौं । छेउको खोलामा पानीले चल्ने एउटा घट्ट पनि देखियो । लगभग पचास—बाउन्न ओटा घर भएको यो गाउँ सीमा क्षेत्रका अरु गाउँभन्दा केही चहलपहल भएको गाउँजस्तो लाग्यो । सीमापारि जङ्गल काटेर भारतको तकिया भन्ने ठाउँ पुगिन्छ रे । माटोमा खेलिरहेका नाङ्गा भुतुङ्गा केटाकेटीहरुको एक हुल धुलो उडाउँदै हामी भए तिर आयो । गुरुप्रसाद कुमाल ती केटाकेटीहरुसित गफिन लागे । उनले उनीहरुलाई गीत गाउन भने । एउटा केटाले मजाले गाइदियो ‘मङ्सिर आयो रहरै सेलायो, तिम्ले बास्तै गरिनौं के लायो? तिम्रो साथमा रातो पछेउरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, खोई त माया गर्न जानेको?’ । अर्को केटा नाच्न लाग्यो । अरु केटाकेटीहरु ताली बजाउन लागे । एकछिन चौतारोनिर भिन्न खाले रमाइलो भयो । गुरुप्रसादले केटाकेटीहरुलाई पसलबाट चकलेट किनेर दिए । चुरे पारिबाट यहाँसम्म विकासको उज्यालो अझैं आइनसकेको भएपनि बद्री पगेनी र शकुन्तला थापाले गाएको दोहोरी गीत भने यहाँ पुगिसकेको रहेछ ।
चुरे फोडेर आएको सुनपत्री खोलाको बगर वरपर फैलिएको छ यो गाउँ । खोलाभरी ट्रेक्टर र मानिसको भीड छ । केही मानिस बालुवा ढुङ्गा खोस्रिरहेका छन् केही टे«क्टरमा गिट्टि ढुङ्गा लोड गर्दैछन् । नेपाली अनुहारका मान्छेको यत्रो हुल त्यो बाटो हिडेको कहिल्यै नदेखेका ती मानिसहरु काम रोकेर हामीलाई हेर्न लागे । ‘कहाँ लान्छन् होला यी गिट्टिढुङ्गा?’ बीपी अस्तुका पत्रकार आँखाले प्रश्न गरे चौतारोनेर उभिएका मान्छेहरुलाई ।
‘उतै लान्छन् भारततिर’ सबैले एकै स्वरमा जबाफ दिए ।
यहाँ न प्रहरी पोष्ट छ न कुनै सरकारी निकाय । गाउँलेहरुलाई ज्यालादारी काममा लगाउने मेट र ठेकेदारहरुकै हालीमुहाली चल्दोरहेछ यतातिर । काठ र गिट्टी ढुङ्गाका ठेकेदारहरु प्रायः भारतीयहरु नै रहेछन् । चुरे पहाड र खोलानालाहरुको दोहनलीला देखेर नमज्जा लागिरह्यो तर प्राकृतिक रुपले प्राञ्जल सुनपत्रीको सुन्दरताले हामीलाई भित्रैदेखि अनौंठो गरी लोभ्यायो । प्राकृतिक श्रोतमाथिको अतिक्रमण यसैगरी चलिरहने हो भने अर्को चोटी आउँदा यो ठाउँलाई यस्तै रुपमा हेर्न पाइने हो कि होइन? के थाहा ?
हामी सुनपत्रीमा केही बेर रमायौं । यहाँको सुन्दरता र चहलपहललाई हेरेर केही साथीले आज यतै बास बसौं पनि भनेका हुन् तर चार बजे नै बास बसी हाल्नु उपयुक्त लागेन । हामी फेरि खोलाको तिरैतिर पश्चितर्फ लम्कियौं । खोला दक्षिण लागेपछि हामी दुईवटा ससाना थुम्का काटेर पल्लोपट्टि ओर्लियौं । पल्तिर भेटियो सुकवा नाका । हरिया थुम्का पार गरेर यहाँ पुगेपछि थाहा भयो यो गाउँ त आफ्नो नामजस्तै सुकेको रहेछ । बैंस नआउँदै जिउ सुकेकी युवतिजस्तो उदासउदास देखियो सुकुवा नाका । आठ—दश वटा झुप्राहरु चुरे पहाडको साँगुरो खोंचमा छरिएर गाउँ बनेको छ । उत्तरबाट आएको सुकुवा खोलाको पानी पनि आफ्नो नामैलाई चरितार्थ गर्दै सुकेको रहेछ । सुकुवा खोलाको डिलमा बसेर हामीले सुनपत्रीबाट मिनरल वाटरको बोतलमा भरेर ल्याएको पानी पियौं । यहाँ साथीहरुले थकाई मेट्दै एकुन्टा रचना सुनाउन पनि भ्याए । दुईटा शेर फुरे । डायरीमा टिपें ः
हाँसेर हिड्ने क्रममा यहाँसम्म आइएछ
अनिश्चित यो जनममा यहाँसम्म आइएछ
कहिले बनेर यात्रु कहिले बनेर यात्रा
केही दिनको रमझममा यहाँसम्म आइएछ
अरु शेर अगाडिको बाटोमा थप्दै जाउँला भनेर थाँती राखें ।
एकै ठाउँमा बस्नलाई हामी यहाँ आएका होइनौं । निरन्तर नयाँनयाँ ठाउँ पुग्नु, नयाँनयाँ बाटो हिड्नु र नयाँनयाँ अनुभूति बटुल्नु हाम्रो उद्देश्य हो । फेरि सुकुवा नाकाबाट अगाडि बढ्यो हाम्रो डफ्फा । गाउँ काट्ने बित्तिकै जङ्गल आयो । हिड्दै गर्दा जङ्गलमा बाटो हराएपछि हामी बिलखविन्दमा प¥यौं । फर्किने कुरा थिएन । जे त पर्ला? जहाँ त पुगिएला ! भनेर अघि बढी रहँदा पहाडको बीचमा एउटा खोल्सो भेटियो । त्यसको किनारमा गाईबस्तु हिंडेका डोब भेटिएपछि हामी त्यसैलाई पच्छ्याएर हिडिरह्यौ । अलि पर गएपछि उत्तरबाट आएको खोलामा मिसियो यो खोल्सा । खोलामा पानी पिएका गाईबस्तुका हुल पल्लोपट्टिको बाटो फर्किरहेका थिए । हामी तिनैलाई फछ्याउँदै पछिपछि लाग्यौं । बाटो भेटियो । बाटोको छेउछाउमा फाट्टफुट्ट घर देखिए । यही रहेछ भैंसाही नाका ।
रात पर्न थालिसक्यो तर वरपर हाम्रो डफ्फा अटाउने जस्तो बास बस्न लायकको घर भेटिएन । हामी वरपर नजर लगाउँदै हिडिरह्यौं । भैसाही नाका ससाना पहाडको बीचमा बगेका थुप्रै खोल्साहरुको छेउछाउमा फैलिएको गाउँ रहेछ । कुनै खोला उत्तरबाट दक्षिण बगेका छन् कुनै खोला पुर्वबाट पश्चिम बगेका छन् ।
‘यो गाउँलाई खोलाहरुको नेटवर्क भन्न मन लाग्यो’ डम्मरले बिम्ब जोडे ।
सेतो रङ्गले पोतिएको एउटा काठे घर देखियो । एउटी महिला घरको आँगनमा कुखुराका चल्लाहरुलाई चारो छरिरहेकी छन् । हामीले बास माग्यौं ।
‘घरमा कोही छोरा मान्ठ छैनन्’ भन्दै टिठाउँदो मुख लगाईन् ।
‘यो बाटो अगाडि जानुहोस् ठूलो गाउँ आउँछ त्यहाँ बास बस्न समस्या हुन्न’ भनेर हामीलाई बाटो पनि देखाइदिइन् । हामी अघि बढ्यौं ।
झमक्क रात परिसक्यो । जिउ थाकेर डल्लो परेको छ तर अझैं बासको टुङ्गो छैन । वरपर केही नदेखिने भैसक्यो । अँध्यारोमा कालो छायाजस्तो देखिने माथिको पहाड र तलको खोलाको अनुमान गर्दै बाटो हिडिरह्यौं हामी । अलि फराकिलो ठाउँमा एउटा स्कुल देखियो । टर्च बालेर हेरेको साइनबोर्डमा गौरीशङ्कर निम्न माध्यमिक विद्यालय भैसाहीनाका लेखिएको रहेछ । छेउमा दुई ओटा घर पनि रहेछन् । तीन जना शिक्षक भेटिए । परिचय भो । विद्यालयका प्र.अ. भदैप्रसाद यादवको घर कपिलबस्तु रहेछ । नरेश बुढा मगरको घर रुकुम र रामबहादुर पुनको घर मनौरानाका रहेछ । उनीहरु खाना खाएर सुत्न लागेका रहेछन् । हाम्रो यात्राको प्रयोजन बुझेपछि उनीहरु निकै खुसी भए । हेडसर यादबले सत्त्ताइस वर्ष अस्थायि सेवा गरेर उमेरको हदले आजै अवकाश लिएका रहेछन् । बिदाई भोज खाएर सुत्ने तरखर गरिसकेका भएपनि नरेशसर र रामसर हाम्रोलागि खाना बनाउन तम्सिए । हामीलाई ढुङ्गो खोज्दा देउता पाएजस्तै भयो । खाना खाएर भुइँमा सुत्ने व्यवस्था गरियो । यादबसरले भावविह्वल मुद्रामा निकै बेरसम्म आफ्ना अनुभव सुनाई रहे । उनको जागिरे जीवनको नियति मात्र होइन हामी उनकै अवकाशको दिनमा त्यहाँ पुग्नुको संयोग पनि अचम्मै लाग्यो ।
खाना खाएर सुत्ने तरखर गर्दा एघार बज्दै छ । मनमा अनेकौं तर्कना खेलिरहेका छन् । थकाई बढी भए पनि निंद्रा पर्न सायद असहज हुँदो रहेछ । कानमा एअरफोन घुसारेर मोबाइलका गीत सुन्दै मनको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा लागें । योगेश वैद्यले गाएको रत्न शम्शेर थापाद्वारा लिखित पुरानो गीतको झङ्कारमा गएर मन टक्क अडियोः
आँखैमा रात ढली शीतैमा तारा डुबे
यही गीत सुन्दासुन्दै भुसुक्कै निद्रा लागि दिए पनि हुन्थ्यो । आजलाई त जसरी पनि नसुती भएको छैन ।